Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu | Aarsaa Kakuu Haaraa New Covenant Ministries
← Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti
Yesus Isa Dinqiisiisaa →
Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka.
Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, ykn immo nama Waaqa ti jedhu ta’a. Marqoos, duuka buutoota Yesus keessa inni tokko, waa’ee Yesus isaa dhugaa fi sirii ta’e nuti himuuf jedhe kitaba isa barresse. Marqoos fi Phexroos, inni dubbi dhuga Yesus Marqoostti dabarse, Yesusiin sirii godhani beeku.
MAREE: Yeroo ati nama tokko utuu itti siqixe hin hubatiin waan isa/ishe beektu siti fakkate jira? Waa’ee namaa beekuuf namicha beeku giddu garagaruma attamittu jiraa?
MEE ITTI YAADII: Namaa tokko siriitti beeku dhabuun ammam namaa miidha?
SEENSA: Marqoos kitaba isatiin bareefamni kuni “Wangeela” – sagale misrachoo waa’ee Yesus ilma Waaqayyo ti jedhe jalqaba. Kitabini isa booqonnan inni jalqaba Yesus attamiitti akka mul’ate fi sabatti beeksiifame nuti hima.
Waa’ee eenyuma Yesus maaliif namooni hara’a ille walii galu dhabu siti fakkata?
Mee Marqoos 1:1-45tti dubbisuun haa caaqasinu. Eenyuman Yesus dhugaa batoota sadiin dhugeefame: Isayaas ( lk. 2-3), Yohannis Cuupha ( lk. 4-8) fi sagalee waaqa irra dhufen (lk. 10-11). Dhugaa batooni sadan kun waa’ee Yesus maal nuti himu?
Yohannis namoota cubbu isaani beeksiifatan cuuphe. Yesus ilma Waaqayyo egga ta’e, maaliif cuuphamuun isa barbachise ( lk. 9-11)? Maaliif kana booda immo qoramee (lk. 12­-13)?
Kun Yesus nu keessa tokko ta’u isaa maal mul’isaa?
Labsin Yesus inni jalqaba “mootummaan Waaqayyoo dhi’aateera” ( lk. 14-15). Kun maallif dubbi misrachoo ta’e?
Debbin keenya maal ta’u qaba? Mee ibsi mee (lk. 15).
Namoota qurxumi-qabdu ta’antu, tarii namoota amantii ille ta’u baatu, duuka buutuu Yesus ta’an (lk. 16-20). Maaliif odeefanno gudda fi barnoota gudda male Yesus duuka buu’an siti fakkata?
Yesus duuka buu’uf namni ammami beeku qabaa?
Aangoon Yesus namoota gargaru isaa keessan ni mul’ata (lk. 21-34). Jecha ykn gocha isa kamtu aango isaa mul’isa?
Mar. 1:35 waa’ee madda aango Yesus maal agarsiisaa?
Fakkenya isaa kana irra maal barranaa?
Utuu hundumitu isaa baradaa jirani, Yesus deeme ( lk. 36-39). Maaliif karra irratti dhabate namicha lamxaa’e sana qabee sitti fakkata ( lk. 40-45)?
Marqoos Yesus eenyu akka ta’e addesee nuti hima. Yesus garuu eenyuma ofi isaa mul’isu waan hin barbadne fakkata (lk. 34, 43-44). Kun maaliif ta’e?
Booqonnan kun akka inni itti eenyuma Yesus mul’isu attamitti gabasiste himtaa?
Kutta kana keessa maaltu sii dinqisiise ykn sii dhiibe? Ibsi.
“Dhaqi, inni mi’a hojii kootii isa warra saba Waaqayyoo hin ta’in duratti, mootota duratti, namoota Israael durattis maqaa koo beeksisuudhaaf ani foadhee dha” Hojji Eergamoota 9:15. Yesusin, humna maqaa keessa jiru beekunis fayyina fida. Maqaa Yesus beeksiisu keessatti ga’een kee maalii lataa?
Waa’ee Yesus Kristos (fayyisaa) beekuuniif Yesus isa fayyisa beekun adda addumaa guddda qaba. Yesusn beekuun fayyina, dhifamu cubbu, abdi jireenya bara baraa qaba. Waaqayyo namni hundinu akka fayyu, dhugaa beeku biras akka ga’u fedha. Afeeraan siif qabus kanuma. Kottu Yesusn beeki. Fayyina, dhifamu cubbu, booqonna, nagaa, qabanna, abdi jireenya bara baraa argata. Ergan wangeela waamicha Waaqayyo isaa karaa Yesus Kristos dhufe kana sii biran ga’u, amanana kee Waaqayyo irra akka godhatu si hubachiisu dha.